Hallo Somalilanders - Page 3 - SomaliNet Forums
Re: Hallo Somalilanders
Postby SahanGalbeed » Thu Apr 22, 2010 9:42 pm
Carabtu halkan kuwa masiixiyinta , intey ghetto-yada ka dhex furtaan meelaha khamriga lagu iibiyo ayay baastolado isku geliyaan , nin iyo naag ba . Wallahi khiyaali noocaas ah maan arag . Yacni waa la is tustusaya , sidu maddowgu ugu soo saqajaamin .Dhagaxdu na mid ay ku arkan baastoolad way ka meeraystaan oo wax ka naf jecel Ilaah ima tusin , miskiinka ayuun bay dhacaan kuwaasi . Wallahi oo bilaahi lacag culus bay ka qaadan iibka khamriga nimanka carabtu .
Postby Goljano Lion » Fri Apr 23, 2010 12:10 am
SahanGalbeed wrote: Carabtu halkan kuwa masiixiyinta , intey ghetto-yada ka dhex furtaan meelaha khamriga lagu iibiyo ayay baastolado isku geliyaan , nin iyo naag ba . Wallahi khiyaali noocaas ah maan arag . Yacni waa la is tustusaya , sidu maddowgu ugu soo saqajaamin .Dhagaxdu na mid ay ku arkan baastoolad way ka meeraystaan oo wax ka naf jecel Ilaah ima tusin , miskiinka ayuun bay dhacaan kuwaasi . Wallahi oo bilaahi lacag culus bay ka qaadan iibka khamriga nimanka carabtu .
Most of the liquor stores owners in the Bay Area are from Yemen
Postby SahanGalbeed » Fri Apr 23, 2010 1:36 am
Oo yemen ma gaalo bay leeyihin ? mise waa muslimiin , yacni isku sheega
Postby Goljano Lion » Fri Apr 23, 2010 1:40 am
SahanGalbeed wrote: Oo yemen ma gaalo bay leeyihin ? mise waa muslimiin , yacni isku sheega
waar waa wada muslim, even when its Ramadaan, they sell
by ManD333q » Sat Aug 18, 2012 2:53 pm » in General - General Discussions
Sat Aug 18, 2012 6:36 pm